Ihere Onwe M Anaghịzi Eme M​—Otú M Si Kwụsị Iche na Abaghị M Uru
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Edo Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Ibanag Igbo Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Kabuverdianu Kannada Kazakh Kikamba Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kongo Korean Kwanyama Lari Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Maya Mingrelian Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Niuean Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Romania) Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tsonga Turkish Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
“Ihere Onwe M Anaghịzi Eme M”
Akụkọ ISRAEL MARTÍNEZ kọrọ
Ndụ m biri: Adara m ogbenye, na-ehi n’okporo ámá, na-echekwa na abaghị m uru
A mụrụ m na Siudad Obregọn dị n’ebe ugwu Meksiko. Abụ m nwa nke ise n’ime ụmụ itoolu ndị mụrụ m mụrụ. Anyị bi n’ime obodo ebe papa m nwere ugbo ọ na-azụ anụmanụ, na-akọkwa ihe ụfọdụ. Ebe ahụ mara ezigbo mma. Ezinụlọ anyị dịkwa n’otu ma na-enwe obi ụtọ. Ma, mgbe m dị naanị afọ ise, ajọ ifufe bịara mebisịa ihe niile anyị nwere, anyị akwagazie obodo ọzọ.
Papa m malitekwara nwetawa ego. Ma, ọ ghọkwara onye aṅụrụma. Ihe a kpara ezinụlọ anyị aka ọjọọ. Mụ na umunne m ndị nwoke abụọ tọrọ m malitere izuru siga papa anyị ma na-ese ya. Otu ụbọchị mgbe m dị afọ isii, aṅụgidere m mmanya, ya egbuwe m. Obere oge ihe a mechara, papa m na mama m kewara, mama m apụọrọ ya n’ụlọ, àgwà ọjọọ m akakwuo njọ.
Mama m mechara kpọrọ mụ na ụmụnne m gaa ya na nwoke ọzọ ebiri. Nwoke ahụ anaghị enye ya ego, ego mama m na-akpata anaghịkwa ezuru anyị. N’ihi ya, mụ na ụmụnne malitere ịrụ ọrụ ọ bụla anyị hụrụ, ma ihe anyị na-akpata anaghịdị ezuru anyị ịzụta ihe ndị dị anyị mkpa. M na-ehichara ndị mmadụ akpụkpọ ụkwụ, na-ere bred, akwụkwọ akụkọ, chịngọm nakwa ihe ndị ọzọ. M na-agagharịkwa na-ele ma m̀ ga-ahụ nri n’ihe ndị bara aba ji ekpofu unyi.
Mgbe m dị afọ iri, otu nwoke gwara m ka m bịa soro ya rụwa ọrụ ebe a na-ekpofu unyi n’obodo anyị. M kwetara ma kwụsị ịga ụlọ akwụkwọ. Ọ na-akwụ m ihe na-eruchaghị narị naịra abụọ n’ụbọchị, na-enyekwa m nri anyị wetara n’ebe ahụ. Eji m ihe ndị m tụtara n’ebe ahụ a na-ekpofu unyi rụta mkpakara ụlọ m na-ehi. Ndị bi ebe ahụ na-ekwu okwu rụrụ arụ, na-ebikwa ndụ rụrụ arụ. Ọtụtụ n’ime ha na-aṅụ ọgwụ ọjọọ, bụrụkwa ndị aṅụrụma. Oge ahụ bụ oge kacha njọ ná ndụ m. M na-ebe ákwá abalị ọ bụla, oké ụjọ ana-atụkwa m. N’ihi ogbenye m dara nakwa akwụkwọ m na-agụchaghị, ihere onwe m na-eme m. M biri n’ebe ahụ a na-ekpofu unyi ruo afọ atọ tupu mụ akwaga n’ebe ọzọ na Meksiko. M bidoro ịrụ n’ugbo ebe a na-aghọ okooko osisi na ogho. Anyị na-egbu okpete, na-egwukwa poteto.
Ebiri m afọ atọ n’ebe a na-ekpofu unyi, dị ka nke a ị na-ahụ ebe a
Mgbe afọ anọ gara, m laghachiri Siudad Obregọn. Adanne mpa m, bụ́ onye dibịa afa, nyere m otu ọnụ ụlọ n’ụlọ ya ka m biri. M bidoro ịna-arọ nrọ ọjọọ, na-adakwa mbà n’obi nke na m chewara echiche igbu onwe m. Otu abalị, m kpere ekpere gwa Chineke, sị: “Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ị dị adị, achọrọ m ịmata gị, m ga-efekwa gị ruo mgbe ebighi ebi. Ọ bụrụ na e nwere ezigbo ụzọ e si efe gị, mee ka m mata ya.”
Kemgbe ụwa, ọ na-agụ m agụụ ịmụta banyere Chineke. Mgbe m dị obere, m gara chọọchị dị iche iche, ma ike ha niile mechara gwụ m. O nweghị nke n’ime ha kụziiri m ọtụtụ ihe banyere Baịbụl ma ọ bụ nyere m aka ịmata Chineke m na-achọ ịmata. Mkpa ụfọdụ n’ime ha bụ ego, ebe nsogbu ndị nke ọzọ bụ na ndị chọọchị ha na-ebi ndụ rụrụ arụ.
Mgbe m dị afọ iri na itoolu, otu ọgọ m nwoke gwara m na Ndịàmà Jehova gwara ya ihe Baịbụl kwuru gbasara iji ihe oyiyi efe Chineke. Ọ gụụrụ m Ọpụpụ 20:​4, 5. Ebe ahụ kwuru na anyị ekwesịghị ime oyiyi a pịrị apị. Amaokwu nke 5 kwuru, sị: “Akpọrọla ha isiala, ekwekwala ka a rata gị ife ha ofufe, n’ihi na mụ onwe m bụ́ Jehova Chineke gị bụ Chineke nke chọrọ ofufe a na-ekewaghị ekewa.” Ọgọ m nwoke jụziri m, sị: Ọ bụrụ na Chineke na-eji ihe oyiyi arụ ọrụ ebube ma ọ bụ chọọ ka anyị jiri ya na-efe ya, gịnịzi mere o ji sị ka a ghara ime ya ma ọ bụ kpọọrọ ya isiala?” Ihe a mere ka m chee echiche. Obere oge, mụ na ọgọ m tụlere ọtụtụ ihe Baịbụl kwuru. Mgbe ọ bụla mụ na ya na-ekwurịta banyere Baịbụl, obi na-atọ m ezigbo ụtọ nke na anaghị m ama mgbe oge ji gaa.
O mechara kpọrọ m gaa ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova. Ihe m hụrụ na ihe m nụrụ ebe ahụ tọrọ m ezigbo ụtọ. Ụmụaka na-etinyedị ọnụ n’ihe a na-amụ, na-ekwukwa okwu nke ọma n’elu ikpo okwu. M gwara onwe m sị: ‘Ihe a na-akụzi ebe a amaka.’ N’agbanyeghị na m dị nkịrịka n’anya, isi erujuokwa m ọnụ, Ndịàmà Jehova ji obi ụtọ nabata m. E nwedịrị otu ezinụlọ sịrị m bịa soro ha rie nri n’abalị ahụ mgbe a gbasara ọmụmụ ihe.
Mgbe mụ na Ndịàmà Jehova mụwara Baịbụl, m mụtara na Jehova Chineke bụ Nna hụrụ anyị n’anya ma jiri anyị kpọrọ ihe, n’agbanyeghị otú anyị nweruru ego, ọkwá anyị, agbụrụ anyị, ma ọ bụ ebe anyị gụruru akwụkwọ. Ọ naghị ele mmadụ anya n’ihu. (Ọrụ Ndịozi 10:​34, 35) Emechaala m matawa Chineke m na-achọ ịmata. Ọ naghịzi adịcha m ka ò nwere ihe na-efunahụ m ná ndụ.
Ndụ m bidoro ịka mma. M kwụsịrị ịṅụ sịga, ịṅụbigba mmanya ókè nakwa ikwu okwu rụrụ arụ. Ma obi na-ajọ m njọ kemgbe m bụ nwatakịrị ma nrọ ọjọọ ndị ahụ m na-arọ ji nwayọọ nwayọọ kwụsị. M na-echebu na abaghị m uru n’ihi ihe ndị mere m n’oge m bụ nwata nakwa n’ihi na agụchaghị m akwụkwọ. Ma emechara m kwụsị iche otú ahụ.
A lụrụ m ezigbo nwaanyị hụrụ Jehova n’anya, ọ na-enyekwara m aka nke ukwuu. Abụ m onye nlekọta sekit nke Ndịàmà Jehova ugbu a. M na-aga eleta ọgbakọ dị iche iche, na-agba ụmụnna m ume, ma na-akụziri ha ihe. Otú Baịbụl si mee ka m gbanwee ndụ m, nakwa ihe ndị magburu onwe ha Chineke na-akụziri anyị, emeela ka ihere onwe m ghara ịna-eme m.
Ọ na-atọ mụ na nwunye m ụtọ ikụziri ndị mmadụ ihe otú ahụ a kụziiri m
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ “Ihere Onwe M Anaghịzi Eme M”
ijwcl isiokwu 7
Mmadụ Niile Hà Nwere Ohere Ha Nhata Ịmata Chineke?
Mụ na Papa M Dịghachiri ná Mma